SCG Building Materials -SCG Easy Grass မြက်အမြင့်4cm. အစိမ်းရောင်
ပင်မစာမျက်နှာ / ထုတ်ကုန်များ / Landscape /
SCG Easy Grass မြက်အမြင့်4cm. အစိမ်းရောင်
အရွယ်အစား:4(cm)
• အရည်အသွေးမြင့်ကုန်ကြမ်ပစ္စည်းများကိုသာအသုံးပြု၍ ထုတ်ထုပ်ထားခြင်း
•သာလွန်ကောင်းမွန်သောနည်းပညာဖြင့်မြက်ခင်းထည်များကိုပြုလုပ်ထားသောကြောင့် ရေရှည်ခိုင်ခံ့သော သက်တမ်းကိုပေးစွမ်းနိုင်ခြင်း
• တပ်ဆင်ရလွယ်ကူ၍ အချိန်ကုန်သက်သာခြင်း
• ရာသီဥတုဒဏ်မျိုးစုံကို ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း
• သုံးစွဲသူများကိုထိခိုက်စေနိုင်သည့် လေးလံသော သတ္တုမပါဝင်ခြင်း
• နေလောင်ဒဏ်ခံနိုင်ပြီး ကြာရှည်စွာအသုံးပြုနိုင်ခြင်း
ပါဝင်ပစ္စည်း : ပလတ်စတစ်
အမြင့် :4cm
ဥယျာဉ်ငယ်၊ဂေါက်ကွင်း၊ကစားကွင်းအစရှိသော နေရာအမျိုးမျိုးတွင် အလှဆင်ခြင်းများအတွက် အသုံးပြုရန်သင့်တော်သော လှပသည့်မြက်ခင်းတု။ ပိုလီအီသလင်းမှ နူးညံ့သောဖိုင်ဘာအမျှင်လေးများအဖြစ် ပြောင်းလဲထုတ်လုပ်ပြီး အောက်ခံပြားပေါ်တွင် တစ်မျှင်ချင်း ကပ်ချည်ထားသည်။ အကြမ်းခံနိုင်ပြီး ကြာရှည်စွာ အသုံးပြုနိုင်သည်။ နေဒဏ်၊ မိုးဒဏ်နှင့် ရေငွေ့အစိုပြန်ခြင်းကို ကောင်းမွန်စွာ ခုခံနိုင်သည်။
2.မြက်ခင်းတု ရာဘာအောက်ခံပြားကို ကော်မသုတ်မီ အမှိုက်များအားရှင်းလင်းဖယ်ရှားပါ။ ဘောင်နှင့်အနားသတ်များအား ကော်သုတ်ပါ။
3.ကွန်ကရစ်ကြမ်းခင်းပေါ်တွင်တပ်ဆင်ရန် မြက်ခင်းတုအားဖယ်ရှားပြီးမှ ကြမ်းခင်းအား ရာဘာပါသောကော်သုတ်ပါ။ ကျောက်ပြားကြမ်းခင်းအတွက် မြက်ခင်းတုကို သင့်လက်ဖြင့် ဖိ၍တပ်ဆင်နိုင်သော်လည်း ကွန်ကရစ်ကြမ်းခင်းအတွက်မူ မြက်ခင်းတုကို လေးလံသော အလေးတုံးနှင့်ဖိ၍ အချောသတ် ပေးပါ။
4. မြက်ခင်းတု၏ အဆုံးသတ်အနားများတွင် Seaming tape အသုံးပြု၍ဆက်ရမည်။Seaming tape နှင့် ဆက်ပြီးလျှင်လက်ကိုသာ အသုံးပြု၍အချောသတ်ပေးပါ။
5.မြက်ခင်းတုများဆက်ရာတွင် မြက်ပင်လေးများ၏လားရာထပ်တူကြပါစေ။ မြက်ခင်းတုကို Seaming tape ကော်သုတ်ပြီး ပြန်ကပ်ပါ။ ခြောက်သွေ့ရန်မိနစ်၂၀ ခန့်ထားပါ။
6.မြက်ပင်ငယ်လေးများ နီးကပ်စွာပူးကပ်သွားအောင် ပွတ်တိုက်ရောနှောပေးပါ။ လားရာတူဆက်ထားပါက ဆက်ကြောင်းပျောက် မြက်ခင်းတုကို ချက်ချင်းတပ်ဆင်ရရှိနိုင်ပါသည်။